Hiran State - News: HS:- Waxqabadka iyo dhaliilaha masuuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan
HS:- Waxqabadka iyo dhaliilaha masuuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan
HS:-Dalka Soomaaliya waxuu si rasmi ah uga baxay xiligii kumeel gaarka ahaa waxayna hada bulshadiisu heleen dowladii ugu horeysay ee rasmi ah oo dalka ka howl gali doonta 4ta sano ee inagu soo aadan.
Inkasta oo meelo badan oo dalka ka mid ah ay wali ka jiraan dhibaatooyin badan hadane dalku uma xuma wadan ay colaad dheer ka jirtay mudo dheer marka loo eego dalalka kale ee African ah ee ay ka dhaceen dagaalada sokeeye sida Soomaaliya.
Gobolka Hiiraan iyo shacabkiisa iyo dhibaatooyinka u baahan in deg deg wax looga qabto si loo helo maamul goboleed masuuliyiinta hogaamineysa ay soo maraan doorasho.
Hiiraan uma baahna in hada waxuu ahaan jiray la baro bulshada Soomaaliyeed amaba reer Hiiraan, waxaa muhiim ah in xaalada laga amba qaado meeshey wax marayaan maanta.
Marka laga soo tago maamul maqaar saar ah oo hada ka howl gala gudaha magaalada B/weyne oo uu dhawr bilood ka hor soo magacaabay madaxweynahii waqtigiisa dhamaaday Shiikh Shariif hadane Hiiraan maanta kama hiro maamulkii ay doonayeen reer Hiiraan waxaana wali inta badan gobolka gacanta ku haya Shabaab.
Dhibaatooyinka muuqda iyo siyaasad xumida ka jirta Hiiraan yaa sabab u ah?
1- Waxaa sabab u ah aqoonyahanadii u dhashay degaankaas oo noqday kuwo kaliya qurbaha ku haya hadal oo jecel iyagoo aan wax ficil ah la imaan in loo hagaajiyo Hiiraan oo loo nabadeeyo.waxaa taasi ka sii daran waxaad arkeysaa mid ka mid ah aqoonyahanada reer Hiiraan oo dalka Soomaaliya caan ka ah oo markasta ku faanaya inuu isagu ahaa.
a) Ninkii dhisay dastuurka ay ku shaqeeyaan IGAD in uu isagu yahay.
b) Ninkii dhisay Dastuurka ay ku shaqeyaan maamulka Puntland in uu isagu yahay.
c)- Ninkii ugu horeyey ee Soomaaliya ee ku magacaaban geed mirood in uu isagu yahay.
Su'aashu waxey tahay hadiiba uu intaas qabtay maxaa ka hortaagnaa in uu intaas u qabto bulshada Hiiraan?
2- Gobolka oon leysku haleyn karin nabadgalyadiisa maadaama uu hogaaminayo nin dhalinyaro ah oo aysan siyaasadiisu furfurneyn, inkasta oo uusan wax eed ah leheyn marka la eego dada uu jiro iyo qaabka uu siyaasada ku soo galay taasi oo meesha ka saareysa inta uu joogo inba la helo dowlad goboleed qofka hogaminayo ay bulshadu soo doortaan.
3-Gobolka Hiiraan waxaa ku sugan ciidamadii ugu badnaa ee ka soo jeeda dowlada Ethiopia iyo ciidamo kale oo ka socda Jabouti mudo sanad ahne waxey ku sugan yahiin magaalada B/weyne oo kaliya, waxaana maalinkasta lagu dilaa gudaha magaalada dadka bulshada indhaha u ah sida aqoonyahanada, nabadoonada iyo dhalinyada soo koreysa.
4-Waxaa bulshada Hiiraan waayadii danbe ku soo badanayey shaqsiyaad horey ugu soo fashilmay siyaasada Soomaaliya oo iskugu jira koox la soo shaqeysay xukumadii Siyaad Bare. Koox la soo shaqeysay kooxdii loogu yeeri jiray Maana feysto xiligii dowladii Cali Mahdi. Koox la soo shaqeeysay SNA oo markii ay fashilmeen wadanka iskaka soo tagay oo hada magaalada Mogdishu dib ugu laabtay kuna fashilmay iney baarlamaanka cusub ka noqdaan xildhibaano oo maalinba meel ku shiraya.
Hadaba aragtida ay qabaan inta badan bulshada Hiiraan.
Waxaan shaki ku jirin in maamulka hada jira uu iska lumiyey fursado badan oo ay ku kasban kareen bulshada ayna hareer mareen talooyin badan oo wax ku ool ahaa oo loo soo jeediyey qaar ka mid ah masuuliyiinta gobolka Hiiraan.
Bulshada Hiiraan uma baahna maamul kumeel gaar ah maamulka hada jirana waxuu la dhacay xukumadii hore iyo madaxweyne Shariif xiligii loogu talo galayna waxuu ahaa 3 bilood waana dhamaaday,Hiiraana waxey u baahan tahay sida dowlada dhexe wajiyo cusub oo hogaamiya oo waliba doorasho ku yimaada ayaa u badan rabitaanka shacabka Hiiraan.
Bulshada Hiiraan ayaa siweyn u soo dhaweynaya maamul goboleed ka curta dhulweynaha Hiiraan oo ay shacabku soo doortaan shaqsiyaadka hogaaminaya dowlada dhexena ay goob joog ka ahaadaan sida ay u dhaceyso doorashadaas.
Qaabka ugu haboon ee maamul goboleed loogu heli karo ayaa ah in laga howl galo intaan oo qodob.
1- Shismaha golahii guurtida amaba duqowda Hiiraan.
2- Odayaashaasne soo dhisaan golahii degaanka amaba baarlamaanka dowlad goboleed.
3- baarlamaankaas iska dhax doortaan gudoomiye iyo ku xigeeno
4- Sidaas lagu soo doorto madaxweynaha Hiiraan State
5- Madaxweynaha soo dhiso tiro yar oo hogaamisa umada.
6- Masuuliyiinta cusub soo magacaaban gudi quburo reer Hiiraan ah oo soo qaabeeya dastuurka iyo qaabka uu u shaqeynayo maamulka cusub.
Ugu danbeyn In degaano ay ugu horeeyso Hiiraan loo helo maamul goboleed waxey faa'ido u tahay dowlada dhexe, bulshada Hiiraan iyo Soomaalida deriska la ha reer Hiiraan waayo dowladahii ka horeyey mida hada jirta waxaa fashiliyey maamul xumida ka jirtay Hiiraan, maadaama ay Hiiraan ku taalo halboowlahii dalka.
Maamulka hada ka arimiya Hiiraan waxaa sharaf u ah waa rag soo dadaalay una soo dhintay xoreynta Hiiraan laakinse mustaqbalka caruurta Hiiraan iyo Soomaaliya waa ka weyn yahay koox hal magaalo maamulkeeda sheegata waa in ay bulshada Hiiraan shir deg deg ah iskugu yeeraan lagana wada arinsado qaabka ugu haboon ee ay bulshadu ku heli karaan maamul goboleed iyagoo waliba meel fagaaro ah ka sheegaya waxa ay ka maamul ahaan aaminsan yahiin si aysan bulshadu waqti badan uga lumin oo ay Hiiraan u noqoto meeshii la dhigi lahaa mustaqbalka dhaw gogoshii ay Soomaaliweyn ku heshiin laheyd iskuna cafin laheyd si dalka iyo dadka Soomaaliyeed loo bad baadiyo.
· admin on October 03 2012 15:08:00 · 0 Comments · 2085 Reads ·
14,934,239 unique visits